ကြီးမားသောကြွေပြားချပ်ချပ်ပြားကုမ္ပဏီအခြေခံအဆောက်အအုံ | Rollza Granito
600 x 1200 မီလီမီတာမီလီမီတာ
800 x 1600 မီလီမီတာမီလီမီတာ
800 x 1800 မီလီမီတာမီလီမီတာ
1200 x 1200 မီလီမီတာမီလီမီတာ
keda polishing လိုင်း
hi-effiness ပေါင်းစပ် polishing ခေါင်းများ. ရှည်လျားသောလွှဲ abrusive. ပွန်းစားခြင်းနှင့်ကြွေပြားများကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ခြင်းနှင့်ကြိတ်ဆုံပါ. crossbream swing, တည်ငြိမ် & ယုံကြည်စိတ်ချရသောအဘို့နှစ်ဆလျှော့ချ drive ကို. ခေါင်းကိုက်ရန်နှစ်ဆဆလင်ဒါ, 0.4Mpa Plc ထိန်းချုပ်မှုအထိဖိအားကိုအလုပ်လုပ်သည်. crossbameam swing ကို Inverter မှထိန်းချုပ်ထားသည်. Tile မျက်နှာပြင်တောက်ပမှုကိုချိန်ညှိနိုင်သည်. overlap နှင့် tile ကိုများများစားစားအတွက် Inverter ထိန်းချုပ်ထားသောအဓိက drive အမြန်နှုန်းကာကွယ်ရေးကိရိယာ. အလိုအလျောက် dodging device ကို optional ကို. အနိမ့် re- polishing နှုန်း.
ပိုမိုမြင့်မားသောဂရပ်ဖစ်များတွင်ပင်သင့်တွင်အလွန်မြင့်မားသော resolution 70 မီတာ / မိနစ်နှင့်ထူးခြားသောတိကျမှုနှုန်းရှိသည်. ကြမ်းပြင်များသို့မဟုတ်နံရံများ, Glaze of Glaze ကိုအပြည့်အဝသို့မဟုတ်မှောင်မိုက်သောနယ်ပယ်တွင်ပါ0င်သည်။.
လိုင်းများနှင့် streaking မရှိပါ
HLT သည် 1988 ခုနှစ်တွင်တရုတ်နိုင်ငံတွင်ပထမဆုံးဟိုက်ဒရောလစ်စာနယ်ဇင်းကိုတီထွင်ခဲ့သည်. YP Series စီးရီးဟိုက်ဒရောလစ်အိတ်စာနယ်ဇင်းများ,. HLT Press သည်တရုတ်, National Key New Products, Guangdong Hi-Tech ထုတ်ကုန်များ, Guangdong ၏လွတ်လပ်စွာတီထွင်ဆန်းသစ်သောထုတ်ကုန်များ,. HLT သည်လူသိများပြီးလူသိများပြီးလူသိများပြီးလူသိများသောကြွေစာစောင်များကိုတရုတ်, ပြည်ပရှိလူသိများသောအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပြီးအာရှ, အာဖရိကနှင့်အမေရိကရှိနိုင်ငံများနှင့်ဒေသအချို့သို့နိုင်ငံပေါင်း 20 ကျော်သို့တင်ပို့ခဲ့ပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ဂုဏ်သိက္ခာရှိ0င်ရောက်ခြင်းကိုတင်ပို့သည်.
Modena Technology (ယခင် Foshan City Modena Modena Modena Modena စက်ပစ္စည်းအမျိုးအစား) ကို 2003 ခုနှစ်တွင် Cower စက်ယန္တရားများနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုအထူးပြုအဆင့်မြင့်နည်းပညာဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ်တည်ထောင်ခဲ့သည်. တရုတ်နိုင်ငံတွင်ကြွေထည်မီးဖို၏အဓိကပစ္စည်းများကို ဦး ဆောင်သူဖြစ်သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကထုတ်ကုန်များတွင်အခြောက်လှန်းခြင်းနှင့်သယ်ဆောင်ခြင်းပစ္စည်းကိရိယာများတွင်ကြွေထည်ပစ္စည်းများကိုထောက်ပံ့သောပစ္စည်းများကိုထောက်ပံ့ပေးသည့်ပစ္စည်းများနှင့်အတူအပင်များတင်ပို့မှုကိုတိုးမြှင့်ပေးထားသည်။ ပြည်တွင်းအလယ်ပိုင်း & အမြင့်ဆုံးစျေးကွက်များအပြင်.
ခြောက်သွေ့သောအစာစားသူသည်ခြောက်သွေ့သောစက်ဝိုင်းနှင့်အသေးစားဂယက်ရိုက်အဖွဲ့များနှင့်အတူတစ် ဦး တည်းဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြင့်ပြည့်နှက်ရန်အတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောစာနယ်ဇင်းအစာစားခြင်းစနစ်ဖြစ်သည်. ၎င်း၏အထူးအင်္ဂါရပ်များမှာလွယ်ကူခြင်း, ထုတ်လုပ်ခြင်း,. တုန်ခါနေသောဇယားကွက်နှင့်လှည့်ထားသောသယ်ဆောင်သူသည်လိုင်စင်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးပြီးအရည်အမှုန့်များကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာကိုင်တွယ်ရန်ခွင့်ပြုသည်.